माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङले रोकिरहेको प्रगति — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङले रोकिरहेको प्रगति
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङले रोकिरहेको प्रगति
काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति असाध्यै सुस्त छ । कुल विनियोजित रू.१ खर्ब बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
लामो समयदेखि अगाडि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति प्रभावकारी नहुनाका विभिन्न कारण रहेका छन् । त्यसमा निर्माण व्यवसायीको कार्यशैली तथा कमजोर आयोजना व्यवस्थापन जोडिएको छ ।
कुल ९९ दशमलव ३ प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको एक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत निर्माण व्यवसायीकै लपर्वाहीले काम गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण प्रगतिका हिसाबले अब थोरै मात्र काम बाँकी छ ।
बाँकी रहेको थोरै काम सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ने हो ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । कारण आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको दुई ओटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सोही कारण स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा आगामी वैशाखभित्रमा पाइप जडान भइसक्नेछ । त्यसपछि माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा रहेको तेर्सो भागमा पाइप जडान शुरु हुनेछ । सो कार्यका लागि मात्रै डेढ महीना थप समय लाग्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी आयोजनाका पदाधिकारी, परामर्शदाता, तीन ओटै ठेकेदारसँग संयुक्तरुपमा निर्माण सम्पन्न हुने कार्यतालिका बारेमा छलफल गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो तालिकाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पुन : जनाएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी असारभित्र कम्तीमा पनि एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम गर्न पुन स् निर्देशन दिएको आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेको भनाइ छ ।
पहिलो युनिटबाट कुल ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यतालिका बनाइ त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुधार गरी कार्यसम्पादन गर्न पुन स् आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको तयारीअनुसार पहिलो युनिटबाट विद्युत् शुरु भएपछि बाँकी पाँच युनिटबाट क्रमैसँग विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलगायतको गम्भीर चासो छ । त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा पनि चालू आर्थिक वर्ष्भित्रमा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले आफूले जनाएका प्रतिबद्धताअनुसारका समय तालिकामा रहेर काम गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिएका हुन् ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच विसं २०७५ को पुस २३ मा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्म्याकोले नै गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनास्थलबाटै भारतमा रहेका टेक्स्म्याकोका प्रमुखलाई फोन गरी निर्माणमा ढिलाइ नगरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
केही महीनाअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीले कलकत्तास्थित टेक्स्म्याको मुख्यालय गई कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनलाई भेटी निर्माण कार्यलाई थप गति दिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार, सिभिल कार्यअन्तर्गत मुख्य सुरुङमा ग्राउटिङ र कङ्क्रिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्य सुरुङमा जाने प्रवेश सुरुङमा गेट राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
विद्युत् गृहका सम्पूर्ण उपकरण जडान भई तयारी अवस्थामा रहेका छन् । प्रसारण लाइनको १२७ ओटा टावर निर्माण र ४७ किलोमिटर तार टाङ्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
रामेछापको खिम्तीमा निर्माण भइरहेको न्यू खिम्ती २२० केभी सवस्टेसनको लिभिलतर्फका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपकरण जडान गरी चार महीनाभित्रमा सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । रासस
२०७६ फागुुण १५ गते १५:१६ मा प्रकाशित
शुक्रवार यी दुई कम्पनीको साधारण सभा
२ सय अंकले बढ्यो शेयर बजार : कारोबार रकम पनि अहिलेसम्मकै उच्च
सोमबार सेयरमा लालझण्डा,१६०० को नजिक झर्यो नेप्से,१० प्रतिशत कमाउने गुमाउनेमा को–को परे ?
पहिलो दिनमै घट्यो नेप्से, कतिको भयो कारोबार ?
कारवाहीपछि एउटैले बुझाए महिनाको १२ लाख कर
अब मनकामनाको सुन्तालामा मनकामनाको सुन्तला लेखिएको स्टिकर !